အိုက်စလန်သို့ခရီးစဉ် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | Islandia, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
သင်ကြိုက်လျှင် အပူရေချိုး သဘာဝတောရိုင်းသဘာဝ၊ အမြဲစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ရင်အိုက်စလန်ကိုသွားလည်ရမယ်။ ၀ န်ကြီးချုပ်ကသူတို့မှာအစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ကြေငြာပြီးပြီ ယခုလ ၁၅ ရက်မှစ၍ နိုင်ငံခြားခရီးသွား to ည့်သည်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်။
ဘယ်လိုလဲ? Covid-19 အတွက်လျင်မြန်သောစမ်းသပ်မှုကိုလေဆိပ်တွင်ဆိုက်ရောက်ချိန်၌ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ အပြုသဘောဆောင်ပါက ၁၄ ရက်မျှ quarantine ရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်မရှိသေးပါ၊ သို့သော်ခရီးစဉ်သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကစိတ်ကူးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ် အိုက်စလန်သို့ခရီး?
ဒါဟာအနောက်မြောက်ဥရောပ၌တည်ရှိ၏ ကျွန်းနိုင်ငံ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကနေ ၎င်း၏မြို့တော်မှာရက်ယာဗစ်ဖြစ်သည်။ အများကြီးရှိပါတယ် မီးတောင်နှင့်ဘူမိဗေဒလှုပ်ရှားမှု ၎င်းသည်၎င်း၏တောင်တန်းများ၊ ရေခဲမြစ်များ၊ ကုန်းပြင်မြင့်များနှင့်မြစ်ချောင်းများကိုအကြွေးတင်နေသည်။
ကျွန်းပေါ်တွင်ခြေလျင်လျှောက်။ ၀ င်လာသူများမှာနော်ဒစ်၊ ဂယ်လီနှင့်ကျွန်းတို့ဖြစ်သည် နော်ဝေနှင့်ဒိန်းမတ်တို့၏လက်တွင်လည်းရှိခဲ့သည် ၂၀ ရာစုအတွင်း၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးနောက်ဆုံးကာလအထိသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး။
Islandia အဲဒါဒီမိုကရေစီပဲ ကြောင်းနေဆဲအချို့သောလူမှုဖူလုံရေးပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးသည်စျေးကွက်စီးပွားရေးဖြစ်သော်လည်းပြည်သူလူထုအတွက်အခမဲ့ပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဘဏ်များကြောင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အလွန်ကြီးမားသောစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်အဓိကကျသောကဏ္ as ဖြစ်သော်လည်းယခုအခါပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်။ ကူးစက်ရောဂါသည်တိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်.
တိုင်းပြည်ကမြှင့်တင်ပေးသောဂန္ပို့စကတ်က၎င်း၏၏ ပြင်ပတွင်ဘူမိရေကန်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးသွားမယ့်နေရာပါပဲ။ ကျွန်း၏ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကအပူရှိန်များစွာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော် ၂၀ ရာစုအထိကောင်းစွာမရောက်မှီတိုင်အောင်၎င်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဦး တည်။ ပုံစံပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကျော်ကြားဆုံးဘူမိအပူစွမ်းအင်ရေကန်သည်ရေကန်ဖြစ်သည် ရေပြာအိုင်။ Reykjanes ကျွန်းဆွယ်ပေါ်ရှိချော်ရည်ကွင်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ရက်ယာဗစ်အနီး။ လှပသောအဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်နှင့်နွေးထွေးသောသမုဒ္ဒရာရေတို့ပင်လျှင်အပူချိန်အနည်းငယ်မျှဖြင့်အပူချိန်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထိုပရဒိသုကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သလော။ ငါနေတဲ့နာရီပေါင်းများစွာကနေအရေးအကြောင်းတွေအားလုံးကိုချန်ထားခဲ့တယ် ...
Lagoon တွင်သင်စာရင်းသွင်းရမည့် spa နေ့အတွက်သင်တစ်နေ့တာနေထိုင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်နေနိုင်သည်။ လှိုဏ်ဂူ၏အနောက်ဘက်ကမ်းရှိချော်ရည်နံရံတစ်ခုအတွင်းရှိ Lava စားသောက်ဆိုင်၌အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်ဖြင့်သင်စားနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မေးပါ အဘယ်ကြောင့်ဂွအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်? ၏အကြောင်းအရာသည် silica မြင်နိုင်သောအလင်းရှိပြီး၎င်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
မြင်နိုင်သောအလင်းသည်လူ့မျက်စိမြင်နိုင်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်၏ရောင်စဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လှိုင်းများဖြင့်တစ်စက္ကန့်ကိုမီတာ ၃၀၀၀၀၀ နှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားပြီး pin ၏အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အရောင်ရောင်စဉ်တစ်ခုလုံးသည်အဖြူရောင်သာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်း၌ကဲ့သို့ပင်ဤအရာကို Prism ၏အကူအညီဖြင့်တွေ့မြင်ရန်လွယ်ကူသည်။ silica နှင့် Blue Lagoon သို့ပြန်သွားသောအခါအမှန်တရားမှာ silica သည် silica နှင့်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းစပ်သောအရာဖြစ်သည် ရေထဲတွင်ဆိုင်းငံ့ထားဆဲဇီဝသက်ရှိသတ္တုဓာတ် နှင့်ဤအရပ်မှရောင်ပြန်ဟပ်မှု။ ၎င်းသည်မြင်နိုင်သောအလင်း၏လှိုင်းအလျားကိုသာရောင်ပြန်ဟပ်သည်၊ ကျန်အရောင်များကိုစုပ်ယူသဖြင့်ထိုဂွသည်အလွန်အပြာရောင်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်အကြီးအ option ကိုဖြစ်ကြသည် Mývatnသဘာဝရေချိုးကန်။ အဆိုပါဂွ Bjarnarflag မှာ Landsvirkjun ရေတွင်းကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းသောရေရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်ပိုက်မှတဆင့်ရောက်ရှိခြင်း၊ တင့်ကားထဲသို့သွားကာထိုနေရာမှပိုက်ငါးခုမှတဆင့်၎င်းသည်ရေကန်အတွင်းရှိရေပူနှင့်ရောနှောသည်။
ထို့နောက် အဆိုပါဂွအတုဖြစ်ပါတယ် သို့သော်၎င်းသည်နူးညံ့သောသဲနှင့်အလွန်ကောင်းသောကျောက်စရစ်ရှိသည်။ ၎င်းရေတွင်အယ်ကာလိုင်းဓာတ်သတ္တုများရှိပြီးရေတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဘက်တီးရီးယားမဖြစ်နိုင်သဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးမရှိသောကြောင့်ရေချိုးရန်အလွန်ကောင်းသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ကဆာလ်ဖာတွေအများကြီးရှိတယ် ဒါကြောင့်လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ သို့သော်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်ကြောင့်အရေပြားအတွက်လည်းအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဂွမှထည့်သွင်းခဲ့ကြသည် နှစ်ခု saunas, အဘယ်သူ၏ရေနွေးငွေ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအော်သံကနေမျက်နှာပြင်ရောက်ရှိ, ဒါကြောင့်သူတို့ကဖြစ်ကြသည် သဘာဝ Sauna အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်လာသည်။ 50% စိုထိုင်းဆနှင့်အတူဤအပူချိန်ဆိုးဝါးပေမယ့်ကံကောင်းတာကသင်က saunas များ၏ရှေ့မှောက်၌, အအေးမိရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းထဲသို့ခုန်နိုင်ပါတယ်။
အပြင်ထွက်ဆွဲရန်ကော်ဖီဆိုင်နှင့်ပြင်ပareaရိယာလည်းရှိပါတယ်။ သင်သည်တစ်နေ့တာ၏ဟင်းချိုကိုအိမ်လုပ်ပေါင်မုန့်၊ အသုပ်များ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့်ကိတ်မုန့်များဖြင့်ရနိုင်သည်။ ဒီနေ့ ပြန်ဖွင့်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရှိပါတယ် နှစ်ယောက်သွားပြီးတစ်ယောက်ကိုပေးရတယ်။ အေးဆေး! အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူကြီးတစ် ဦး သည် ISK ၅,၅၀၀ ပေးသော်လည်းသင်သုတ်ပဝါများ၊ ဒီဆိုဒ် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်လှစ် အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ပါကအချက်အလက်အားလုံးကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်တွေ့လိမ့်မည်။
Glacierworld သည် Hoffell တွင်ရှိသော spa တစ်ခုဖြစ်သည်လှပသောတောင်တန်းများနှင့်ရေခဲမြစ်များဖုံးလွှမ်းနေသောတောင်တန်းများပါရှိသည်။ အတိအကျဆိုပါက spa နှင့်အတူဟိုတယ် ရေခဲမြစ်နှင့် ၃ ကီလိုမီတာသာဝေးသည်အနုပညာသည်အိုက်စလန်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား dest ည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်Vatnajókullမှအနုပညာကိုလမ်းလျှောက်။ ရှုခင်းကိုခံစားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အခန်းသုံးခန်းနှင့်ဘူမိအပူအအေးပေးစနစ်များကိုအခမဲ့ပေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်aည့်သည်မဟုတ်သူဖြစ်ပါကနေ့စဉ်နှုန်းထားကို ပေး၍ ခံစားနိုင်သည်။
Geosea သည်အိုက်စလန်၏ဘူမိအပူစွမ်းအင်ဆိုင်ရာမက္ကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်း၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိပြီး၎င်း၏ရေသည်ဓာတ်သတ္တုကြွယ်ဝပြီးဆားငန်သောပင်လယ်ရေနှင့်အတူကမ္ဘာမြေ၏ဝမ်းဗိုက်မှထွက်လာသည်။ Skjálfandiဂလားပင်လယ်အော်နှင့်အာတိတ်စက်ဝိုင်းအပေါ်စီးကုန်းမြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒီကနေသင်ကဝေလငါးတွေနဲ့လှပတဲ့မြောက်ပိုင်းအလင်းများတောင်တွေ့နိုင်တယ်။
ဤရွေ့ကားအချို့သောဖြစ်ကြသည် အိုက်စလန်ကမ်းလှမ်းသော spa နေရာများ, ဒါပေမယ့်ကျွန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပိုပေးထားပါတယ် ရှုခင်းများနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ။ ဥပမာ, Vatnajökullအမျိုးသားဥယျာဉ်တိုင်းပြည်အတွင်းအကြီးဆုံး။ ၎င်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်မတိုင်မီကအမျိုးသားဥယျာဉ်များဖြစ်ခဲ့သည့်အမည်နှင့်ရေခဲမြစ်နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဥရောပတွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။
ပန်းခြံအများစုသည်ရေခဲမြစ်ဖုံးလွှမ်းနေသောရေခဲပြင်အောက်တွင်ရှိနေသည် အဆိုပါရှုခင်းကွဲပြားခြားနားသည် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်။ ဒါကဒါကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတယ်။ ပင်လယ်ထဲသို့စီးမျောနေသောရေ၊ မီးတောင်၊ တောင်များ၊ အနက်ရောင်သဲများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ မီးတောင်များမှမွေးဖွားလာပြီးရေခဲမြစ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့်မြစ်ကမ်းပါးသို့သယ်ဆောင်လာသည်၊ ကြီးမားသောရေခဲနှင့်မျောနေသောကြီးမားသောဂွ ... အမှန်တရားမှာသင် လုံးဝပြီးဆုံးသောကြောင့်ဤ ဦး တည်ရာကိုမလည်ပတ်ရ အိုက်စလန်သို့ခရီး။
အကယ်၍ သင်သည် gastronomy ကိုထည့်ပြီးအပူရေချိုးခြင်းသို့လမ်းလျှောက်ပါကအိုက်စလန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Islandia » အိုက်စလန်သို့ခရီး